Proposal For Ornagai — MYSTERY ZILLION
Proposal For Ornagai
Ornagai dictionary မှာ နောက်ထပ် ထပ်မံပြီး update လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဓိက အားဖြင့် မြန်မာစာ search method ပိုင်းကိုပေါ့။
အခုလက်ရှိ ပြသနာက တံ ကို ရှာရင် တုံ လည်းထွက်တယ်။ တုံး လည်းထွက်တယ်။ ကို နဲ့ ကုိ နဲ့ result ကတော့ လက်ရှိတူသွားပါပြီ။ တံ က တုံ ၊ တုံး ဆိုတာတွေ မထွက်အောင် အတွက် လက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ syllable breaking ပေါ့။ စာလုံးလေးတွေကို ဖျက်ပြီး0width space ထည့်မလို့ပေါ့။ size တော့ ကြီးသွားမယ်။ query ပိုင်းမှာတော့ ရမယ့် result ကနည်းသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် speed တက်လာမယ်လို့ မျှော်မှန်းတယ်။ ကိုလူပျိုကြီးကော ဘယ်လို ထင်လဲမသိဘူး။ size ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှာမယ့် အချိန်ပိုကြာသွားနိုင်မလား ?
အဲဒီ နှစ်ဆင့်ပြီးရင် spell checking အဆင့်ကို စဉ်းစားမယ်။ စာလုံးပေါင်းမှားရင် ပြင်ပေးလို့ရအောင်ပေါ့။ ornagai result တွေထဲကနေပဲ did you mean လေး လုပ်ရင် ကောင်းမလား ဒါမှမဟုတ် ကိတ်တို့လုပ်ထားတဲ့ word list ကနေ ပဲ check လုပ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ။
syllable breaking 85%
တော့ပြီးနေပြီ။ အကုန်လုံးကို check ပြန်လုပ်နေတာပေါ့။ အဲဒီ နှစ်ဆင့်ပြီးရင်တော့ ornagai မှာ မြန်မာစာကို တိကျသေချာစွာရှာနိုင်တော့မှာ့ပါ။
ဒါနဲ့ အဲဒါကို အသံဘယ်လို ထွက်လည်းဟင်။ အိုးနာကြီး လား။ ဂျပန် နာမည်ထင်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလည်းဟင်။
ကိုစေတန်ကြီး ပြောတာတော ့Born Again ကိုရိုက်ရာမှာ အရှေ ့က B နဲ ့Again နောက်ဆုံးက N ကပြုတ်သွားတယ်လို ့ပြောတယ်ဗျ။ ထွက်လာတော ့Ornagai တဲ ့။
အဲဒါနဲ ့သူလဲ ပြန်မပြင်ဖြစ်တော ့ပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တာနဲ ့တူပါရဲ ့။
စေတန်ပြောတာတော့ အသံထွက်က အော်နဂီလို့ပြောတာပဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ вЂњအိုနာခါးကိုင်вЂќ ဆိုပြီး စနောက်ကြပါတယ်။ :d အော်ရာမင်းဂျီနဲ့လဲအမျိုးတော်ပါတယ် ):p
ကြံကြံဖန်ဖန်... ရှေ့ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအလုံးတွေမှ တိတိကျကျကြီးလာပြုတ်ရတယ်လို့... ထွင်တာထင်တယ်...:)
အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း (အိုနာသေ) လက္ခဏာ ရေး သုံးပါးကို Modern ပြန်ရေးထားတာဗျ။ 'အိုနာဂိ' တဲ့။ :P:P:P
ဘယ်လောက်မိုက်လဲ။ လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပါယ် လဲရှိတယ်။ ခေတ်လဲမှီတယ်။ သူမို့လို့ စဉ်းစားမိတာဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ အိုနာကိုင်း ထင်တာပဲ.. :d အကြည်တော်ရဲ့ နတ်နေကိုင်းနဲ့ ဘယ်လိုအမျိုးတော်လဲမသိ...
အိုင်ဒီယာလေး တစ်ခုပေါ့နော်။ အားလုံးက မြန်မာစာလုံးတွေ တိုက်ရိုက်သုံးဖို့ မေ့နေကြတယ်ထင်တယ်။
ဥပမာ။ ။ အဘိဓါန် ဆိုတော့ arbidan/arbiden အဲဒါမျိုးတွေ ရွေးပေါ့။
ပညာရေး ဆိုက်ဆို တိုက်ရိုက် pyinnyar. com ဆိုပြီး ပေးတာတို့လေ။
သတင်းဆိုက်ဆို နှစ်လုံးတည်း ludu .com ဆိုပြီး ပေးရင်ကော။
မြန်မာတွေပဲ သိတဲ့ စာလုံးတွေ ရွေးပေးတော့ လွတ်လပ်တယ် လွယ်ကူတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
(အပေါ်က ဥပမာ ဆိုက်တွေကို ရှာကြည့်တယ်။ ဘယ်သူမှ မသုံးရသေးဘူး။) \_:D/
ဝဘ်ဆိုက်တွေမှာစာဖတ်ရင်းနဲ့ နားမလည်တာတွေ့ရင်ကော်ပီကူး အိုနာဂစ် မှာ ပေ့စ်လုပ် ရှာလိုက်ရင်
ရှာမတွေ့ပါ ဆိုတာပဲပြနေတာ သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ စပေ့စ်က နှစ်ခုလောက်ပါနေတာ
စပေ့တစ်ခုပဲဆိုရင်တော့ရှာလို့ရပါတယ် ဂူးဂဲမှာဆိုရင် စပေ့စ် အများကြီးပါလည်း ရှာပေးပါတယ် ပြသနာကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ
နောက်တစ်ခုသိချင်တာက ဘားဂလစ် မိုဇီလာ အက်အွန်နဲ့ဆိုရင် အမ်ဇက်မှာ စာရိုက်လို့မရဘူး အင်းဂလိပ်စာတွေပဲပေါ်နေတာ Titleမှာတော့ရတယ် Massage မှာရိုက်မရတာပါ